रविको छवि ‘मिनी अख्तियार’ जस्तै थियो , घूस खानुअघि हरेक सरकारी कर्मचारीको दिमागमा रविको चित्र आउँथ्यो ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/रविको छवि ‘मिनी अख्तियार’ जस्तै थियो , घूस खानुअघि हरेक सरकारी कर्मचारीको दिमागमा रविको चित्र आउँथ्यो !
काठमाडौं । अहिले चर्चामा रहेको शालिकराम पुडासैनी प्रकरण थप नयाँ मोडमा पुग्न थालेको छ । काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न शहरहरुमा प्रदर्शन भइरहेको छ । अहिले हिरासतमा रहेका सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेलाई चर्चित कलाकारहरुले पनि साथ दिएका छन् ।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनी प्रकरण र पत्रकार रवि लामिछाने लगायत पक्राउ परेका युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीको न्यायिक छानविनको माग गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दीपकराज गिरी, निखिल उप्रेती, रमेश उप्रेती, लगायतको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा छानविन निष्पक्ष हुनुपर्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाले भने, ‘रवि लामिछानेले न्याय पाउनुपर्छ, तर छानबिनमा दबाब नदिऔं ।’ यस्तै जीवनत्याग गर्न बाध्य पार्ने कानुन नै आफुलाई चित्त नबुझेको बताए । उनले भने, ‘अहिले हामीले कानून संशोधन गरेका छौं । म त कानूनमै दोष देख्छु ।
आक्षेप लगाउने मान्छे १०० प्रतिशत सत्य हुँदैन् । कानून सुधार गर्नुपर्छ । यदि कोही मान्छेले म त मुर्छु र अरुलाई पनि दुःख दिन्छु भन्यो भने धेरै मान्छे कष्टडीमा हुन्छन् ।’ जनताको नायकलाई जबरजस्ती खलनायक बनाउने काम भइरहेको गिरीको बुझाई रहेको छ । अभिनेता निखिल उप्रेतीले नेपालमा विशुद्ध नेपाली झण्डामुनि बसेर सत्य बोल्ने वातावरण नभएको बताए ।
उनले पछिल्लो समय मानवता खत्तम भएको र सत्य भन्ने चीज हराएको दुःखेसो गरे । उनले सत्य बोल्नको लागि पनि कुनै पार्टीको झण्डा बोकेको हुनुपर्ने तर त्यो पनि अर्को विपक्षी पार्टीलाई चित नबुझ्ने बताए । आफु सत्यको पक्षमा लागेको उनले बताए ।
देश र जनताप्रति राजनीतिक गर्ने व्यक्तिहरु ईमानदार हुनुपर्ने उनले जिकिर गरे । पछिल्लो समय मानिस शक्तिकेन्द्रित भएपछि नशामा केन्द्रित हुने भन्दै शक्तिको गलत प्रयोग गर्न नहुने उनको बुझाई रहेको छ । सबैले सत्य र निष्पक्ष अनुसन्धान भएर शालिकरामलाई न्याय दिन माग गरेका छन् ।
Breaking…कक्षा १२ को परीक्षा अनलाइनबाट पनि दिन सकिने [ सक्दो शेयर गरौँ ]